थाहा खबर: 'प्रदेश सरकारका कानुनले व्यवसायमा असर पर्छ'
'प्रदेश सरकारका कानुनले व्यवसायमा असर पर्छ'
दाङ : तुलसीपुर राप्ती अंचलको सदरमुकाम हो। यही तुलसीपुरमा २०४९ सालमा यहाँका व्यापारीको हकहितका लागि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना भएको हो। तुलसीपुर सबै किसिमले केन्द्रविन्दु मानिन्छ। तुलसीपुर मुख्य गरी व्यापारी दृष्टिकोणले केन्द्रविन्दु मानिन्छ। यहाँ दाङलगायत सल्यान, रुकुम, रोल्पा र अन्य जिल्लाका मानिसहरू आवतजावत गर्ने भएकाले पनि तुलसीपुरलाई दाङको केन्द्रविन्दुको रूपमा हेरिएको छ। तुलसीपुरमा टरिगाउँ विमास्थल, विभिन्न ठाउँमा पर्यटकीयस्थल पनि छन्।
उत्तरमा पहाडी जिल्ला, दक्षिणमा बाँके र पश्चिममा सुर्खेत जाने सडकसँग जोडिएको तुलसीपुरमा साना, मझौला र ठूला उद्योगहरू संचालन भएका छन्। तुलसीपुरमा अहिले करिब दुई हजार व्यापारीहरूले आआफ्ना व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका छन्। यहाँ खाद्य, कृषि, सिमेन्टलगायत ठूला उद्योगहरू संचालनमा छन्। तर केही वर्ष पहिले यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने अवस्था नभएको यहाँका व्यापारीहरूले बताउँछन्। जति बेला देशमा सशस्त्र द्वन्द्व थियो, त्यो समयमा यहाँका व्यापारीहरूले धेरै सास्ती भोगेका थिए। अहिले देश स‌ंघीयतामा गएपछि तुलसीपुरमा उद्योगी व्यवसायीको अवस्था के छ? के कस्ता किसिमका उद्योगहरू संचालनमा आएका छन्? यस्तै विषयमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वीरबहादुर रावत (वीरु)सँग थाहाखबरकर्मी विकास डाँगीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
देश स‌ंघीयता जानु अगाडि र पछाडि यहाँको व्यवसाय कस्तो छ?
जहाँ मानिसहरूको आवतजावत बढी हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षाको चुनौती आउँछ। त्यसैगरी यो व्यापारिक केन्द्र पनि हो। त्यसैले यहाँ सुरक्षा चुनौती हुन सक्छ। तर हिजोको दिनहरूमा छिटपुट घटनाहरू पनि भएका हुन्। व्यापारीहरूको अपहरण गरी हत्यासमेत भएको थियो। त्यस्तै, चन्दा आतंक पनि उतिकै थियो। तर पछिल्लो समय प्रदेश प्रहरी कार्यालय, १९ नम्बर बाहिनी अड्डा, सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प, इलाका प्रहरी कार्यालय जस्ता तुलसीपुरमा सुरक्षा सम्यन्त्र छन्, त्यसैले अहिले उद्योगीहरूलाई राम्रो अवस्था छ।
व्यापारीहरूले धेरै नाफा लिने र कालोबजारी गरी समान बेच्ने गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ नि?